तपाईंको दान – Islam Guide
Category: तपाईंको दान
दान (जकात) इस्लामको तेस्रो आधार हो । अल्लाहले यसलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ । दान नदिनेहरूका लागि दण्डनीय सजायको धम्की दिनुभएको छ । इस्लामी भाइचाराको लागि प्रायश्चित र सलाहको साथमा दानलाई पनि अनिवार्य गर्नुभएको छ । अल्लाहले भन्नुभएको छ– “यदि तिनीहरू तौबा (प्रायश्चित) गर्छन्, सलाह कायम गर्छन् र दान दिन्छन् भने तिम्रा धार्मिक भाइ-बन्धु हुन् ।” (कुरआन : ९/११)
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नुभएको छ– “इस्लाम पाँच कुराहरूमाथि आधारित छ, त्यसमध्ये सलाह कायम गर्नु र दान दिनु हो ।” (बुखारी : ८, मुस्लिम : १६)
दान कसलाई दिने? जकातको रकम कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई इस्लामले हदबन्दी गरेको छ। एक हकदार वा अधिक हकदारहरुलाइ दिन सक्छ। त्यसैगरी दानको रकम मुस्लिम हकदारसम्म पुर्याउने संघ-संस्थाहरुलाई दिनु जायज छ। आफ्नै गाउँमा रहेका हकदारहरुलाई दान दिनु बेस हुन्छ। दानका हकदार व्यक्तिहरु निम्न हुन्- १) गरीब…
डिसेम्बर 31, 2017 डिसेम्बर 31, 2017 Comments
कुन धन-सम्पत्तिमा दान अनिवार्य छ?
कुन धन-सम्पत्तिमा दान अनिवार्य छ? व्यक्तिगत प्रयोगमा आउने चीजबीज र सरसामानहरूमा दान (जकात) अनिवार्य छैन, जस्तै… घर चाहे जतिसुकै महँगो होस्, गाडी चाहे जतिसुकै विलासी होस्। त्यस्तै लुगाफाटा र खानपिनमा जकात अनिवार्य छैन। अल्लाहले व्यक्तिगत प्रयोगमा नआउने तथा व्यवसाय र वृद्धिको उद्देश्यले राखिएका मालसामानहरूमा मात्र दान अनिवार्य गर्नु भएको छ।…
दानका उद्देश्यहरु अल्लाहले महान उद्देश्यहरुलाई सार्थकता दिनको लागि मुस्लिमहरुमाथि दान अनिवार्य गर्नु भएको छ। तीमध्ये केही निम्न छन्- १) धन-सम्पत्तिको चाहना र माया मानिसको लागि स्वभाविक कुरा हो। यसलाई जोगाउन र राखि राख्न मानिसले कति प्रयत्न गर्दछ। त्यही लोभ, कन्जुस्याइँ र मालको मायाजालबाट पवित्र पार्न इस्लामले दानलाई अनिवार्य गरेको छ।…